1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine (54777-54-7) - APICMO
APICMO ဆေးဝါးထုံးစံပေါင်းစပ်နှင့်စာချုပ် R & D ကိုတစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်
စိတ်တိုင်းကျပေါင်းစပ်နှင့်စာချုပ် R & D
အသေးစား & အကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
ဖြစ်စဉ်ကို R & D နှင့်အသစ်လမ်းကြောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ထုတ်ကုန်များ > 1-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine (54777-54-7)
ဒီထုတ်ကုန် (s) ကိုတစ်ဦး APICMO စာချုပ်အပေါ်နေထိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း, CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine (54777-54-7) ၏အမြောက်အမြား synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်
SKU: 54777-54-7 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
APICMO 1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးအစား intermediates ကပိုင်ဆိုင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဒီထုတ်ကုန် (s) ကိုတစ်ဦး APICMO စာချုပ်အပေါ်နေထိုင်သည်။ သငျသညျ non-မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူအဖြစ်ဒီစာမျက်နှာကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင်, စျေးနှုန်း (s) ကိုပြသစာရင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ , သင့်စျေးနှုန်းရှုမြင်သင့်အကောင့်အရေအတွက်ကသုံးပြီးလော့ဂ်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များများထဲမှဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူဖြစ်လာစေရန်။ အမိန့်, အဆက်အသွယ်နေရာ APICMO ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု.
1-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine (54777-54-7) Specifications
CAS အောင်မင်း% 95%
CAS မက်% 100%
MDL အရေအတွက် ရရှိနိုင်သောအဘယ်သူမျှမဒေတာများ
InChI Key ကို InChI=1/C7H14ClN/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6H2,1H3
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း Pyrrolidine, 2- (2-chloroethyl) -1-methyl-
2- (2-Chlorethyl) -1-methylpyrrolidin
2- (2-Chloroéthyl) -1-méthylpyrrolidine
အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectrum ရရှိနိုင်သောအဘယ်သူမျှမဒေတာများ
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 147.6458
1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine (54777-54-7) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(54777-54-7) GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သတိပေးချက်: ဒီက web site ပေါ်တွင်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်၎င်း၏စာအုပျ၏ရက်စွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ယုံကြည်ချက်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ ပေးထားသောအချက်အလက်များသည်သာဘေးကင်းလုံခြုံကိုင်တွယ်နှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအာမခံသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်မဟုတ်ပေ။
1-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine (54777-54-7) Articles
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒအတွက် Steric Factor
သိပ္ပံပညာရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဘဝကသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတု Synthesis, Chromatography, Analytical နှင့်အခြားသောအပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းများအားလုံးဒေသများရှိအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။
1-methyl-2- (2-chloroethyl) pyrrolidine (54777-54-7) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
သင့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သုတေသန application များအတွက်ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်လိုအပ်ပါသလား?
Methyl 1-(Boc-aMino)-3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8)
di-tert-butyl chloromethyl ဖော့စဖိတ် (229625-50-7)
အပိုဒ်အုပ်စုများ Category ေရြးပါ CMO အကြောင်းအရာ (2) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ (7)
2019 CNS ကုသမှုမူးယစ်ဆေး Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ဝက်ဦးနှောက် (37758-47-7) 06 / 05 / 2019
သင်က Pyridines အကြောင်းသိထားဖို့လိုအားလုံး 08 / 30 / 2018
ကမ္ဘာ့ခုနှစ်တွင်သြဇာအရှိဆုံး Heterocycles 08 / 28 / 2018
သငျသညျ spiro ဒြပ်ပေါင်းများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး 08 / 28 / 2018
2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (ဓာတု abstraction န်ဆောင်မှုများ) Registry ကိုနံပါတ် 22536-61-4 08 / 18 / 2018
APICMO - စီးပွားရေး, APICMO & ဆေးဝါး
APICMO အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သော့ချက်အလယ်အလတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေတဲ့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအတွက်ဒြပ်နှင့်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများပြည့်စုံသည့်စနစ်ထောက်ပံ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်နှင့်ကန်ထရိုက် R & D
အသေးစား & အစုလိုက်အမိန့်အမိန့်
အဆောက်အဦး: D,2ကြမ်းပြင်, အမှတ် 128, Xiangyin လမ်း, Yangpu ခရိုင်, 200433, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
© Copyright 2019 APICMO ။ All Rights Reserved ။